Tag: munhu | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 13, 2020 Chipiri, Gunyana 13, 2020 Douglas Karr
Makambani akawandisa anogadzira webhusaiti, nhoroondo yemagariro, kana peji rekumhara vasinganzwisise chinangwa chemushanyi. Vagadziri vezvigadzirwa vanomanikidza iyo yekushambadzira dhipatimendi kunyora maficha. Vatungamiriri vanomanikidza dhipatimendi rekushambadzira kuti ribudise kuwanikwa kwazvino. Zvikwata zvekutengesa zvinomanikidza dhipatimendi rekushambadzira kusimudzira kupihwa uye kutyaira zvinotungamira. Izvo zvese zvinokurudzira zvemukati sezvo iwe uri kutsvaga kugadzira webhusaiti kana peji rekumhara. Kana isu tichigadzira nekuvandudza kuvapo kwewebhu kwe
NeChishanu, Gumiguru 19, 2018 Mugovera, October 20, 2018 Nina Ritz
Iwe haugone kuchengeta izvo zvausinganzwisise. Kana ichitariswa pakutenga vatengi nguva dzose, zvinova nyore kutorwa. Zvakanaka, saka wafunga zano rekutora, waita kuti chako chigadzirwa / sevhisi zvikwane muhupenyu hwevatengi. Yako yakasarudzika kukosha chirevo (UVP) inoshanda - iyo inonyengerera kutendeuka uye inotungamira kutenga sarudzo. Unoziva zvinoitika shure? Mushandisi anokodzera kupi mushure mekupedzisa kwekutengesa kutenderera? Tanga nekunzwisisa Vateereri vako Kunyange chiri